Col. Qaalib ?Ciidamada Jubba banaanka ayaa loo saaray si loo qabto deegaanada naga maqan? – Radio Daljir
Oktoobar 18, 2013 4:18 b 0
Kismaayo, October 18, 2013 – Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa shaaciyey in ay bilaabi doonaan howlgalo balaaran oo ka dhan ah ururka al-shabaab, kuwaas oo laga fulinayo deegaano ka tirsan gobollada saddexda ah oo ay ururku gacanta ku hayaan.
?Qorshaha ugu dhow ee maamulka ayaa ah in aan la wareegno inta badan deeganada ka maqan gacanteena ee gobolka.? Ayuu yiri taliyaha ciidamada maamulka Jubba Maxamuud Qaalib oo warbaahinta kula hadlay Kismaayo.
Taliyaha ayaa intaas ku daray in gebi ahaanba ciidamada magaalooyinka laga saaray, Col. Qaalib waxaa uu sheegay in ay qaadi doonaan talaabooyin hor leh ? Ujeedada loo saaray ciidanka ayaa ah in ay banaanka ka bilaabaan difaaca iyo qabashada meelo hor leh.?
Maamulka Jubba ayaa ciidamo fara badan qortay bilihii ina dhaafay taliye Qaalib ayaa sheegay in ay socdeen qorshayaal dhowr ah oo ay ku dardar gelinayeen kordhinta ciidamada kala duwan ee maamulka, taas oo sahlaysa in ururka Al-shabaab laga saaro gobollada qaybtood sida uu hadalka u dhigay.
Degmooyinka badankood iyo meelaha muhiimka ah ee gobolka Jubbada hoose ayaa waxaa gacanta ku haya ururka Al-shabaab, oo sanadkii hore dagaal looga saaray magaalada Kismaayo ee xaruunta Jubbada hoose, balse qorshaha maamulka ayaa lagu tilmaamay mid sii fidaya.
Tuulada Kabxanleey ee hiiran oo lagu dagaalamay iyo dowladda oo ciidamo degdeg ah u diraysa